Daawo: Madaxweyne Axmed Madoobe oo shir Gudoomiyay kulankii u horeeyay ee golaha Amniga Jubbaland. – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Madaxweyne Axmed Madoobe oo shir Gudoomiyay kulankii u horeeyay ee golaha Amniga Jubbaland.
by admin 26th November 2017 26th November 2017 065
Kismaayo, November, 26, 2017.Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta shir gudoomiyay kulankii ugu horeeyay ee golaha amniga heer Dowlad Goboleed kaas oo ka farcamay golaha Amniga Qaranka.
Labada Madaxweyne ku xigeen Sarakiisha Ciidamada Wasiiru-Dowlaha Amniga Wasiirka Arimaha gudaha wasiirka Cadaalada Diinta iyo Arimaha Dastuurka wasiirka Maaliyada iyo Wasiiru-Dowlaha Madaxtooyada oo kamid ah xubnaha golahan ayaa kulanka ka qayb galay.
Xaaladaha Amniga deeganada Jubbaland iyo abaabulka Ciidamada ayaa kamid ah qodobada kulanka lagaga hadlay.
Xubnaha golaha uu ka kooban yahay ayuu Madaxweynahu ka dhagaystay xog uruurin iyo tixraac ay maalmahan wadeen oo la xiriira tayada iyo tirada Ciidamada iyadoo la qorshaynayo in mudo kooban hawshaa lagu soo dhameeyo.
Dhaqaalaha deeganada Jubbaland ayaa la isku raacay in la mideeyo isla markaana miisaniyad kordhin la sameeyo mudada loo diyaar garoobayo hawlgalada la qorsheeyay si joogto uu u noqdo mushaarka Ciidanka iyo saadka ay u baahan yihiin.
Arimaha maamulka iyo adeega Bulshada ayuu golahu isku raacay in la dardar galiyo gaar ahaan Garsoorka iyo Cadaalada iyadoo wakhti dhaw la dhisi doono gudiga adeega Garsoorka.
Shirka Amniga Qaranka oo dhawaan ka dhacaya Magaalada Muqdisho ayay Jubbaland la tagi doonta qorshe dhamaystiran oo la xiriira sida ay noqonayaan hawlgalada lagu xoraynayo deeganada ay Al-Shabaab wali kaga sugan yihiin Jubbaland.
Xaaf iyo Wafdigiisa Jabuuti haddii ay gaaraan Ahlu-sunna Shirkaan yaa uga qeyb gali doono?
TOP NEWS: Dhageyso Ergada Shirka Jowhar ka qeyb galeysa oo Si Kulul uga hadlay Mooshinka Shirka looga soo horjeedo sheegayna in ay…
Buug taariikhi ah oo uu qoray Prof Cabdi Ismaaciil Samatar oo Maanta Muqdisho lagu soo Bandhigay (Sawirro)